Web Rank Nepal
Business Portal of Pahilopost.com
Reviews are not available yet. click here to add your review
२० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दै सरकार, यस्तो हुनेछ प्रक्रिया
काठमाडौंं – सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब २० हजार नयां कर्मचारी भर्ना गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
Bipat ko Bela Sahayog Garau
हावा हुरीले वितण्डा मच्चाएको आज तेश्रो दिन । सरकार तथा समबन्धित निकायबाट अनुगमन हुनुबाहेक पीडितहरुको राहतका लागि अहिलेसम्म एउटा टेन्ट
अदालतमा सरकारको छायाँ छ कि छैन ? कानुनमन्त्री र बार अध्यक्षबीच सवाल जवाफ
२० चैत, काठमाडौं । न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा कानूनमन्त्री र नेपाल बारका अध्यक्षवीच न्यायालयमा सरकारको प्रभाव छ कि छैन भन्नेबारेमा रोचक सवाल-जवाफ चल्यो ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता: न्यायिक सुशासनको प्रतिवद्वता’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा न्यायपालिकामाथि सरकारको हस्तक्षेपको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालबीच सवाल-जवाफ भयो ।
प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि: ‘हेलिकोप्टरमा उडेरमात्र हुँदैन, पाल खसाइदिनोस्’
बारा, १८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकोप्टरबाट मात्र निरीक्षण गरेपछि हावाहुरीबाट पीडित नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार राति वर्षासँगै आएको हावाहुरीले बाराको फेटा गाउँपालिका प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा धेरै धनजनको क्षति भएको फेटामा प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोली जाने भनिएको थियो ।
आजकल हामी हरेकसँग हातमा सेलफोन छ। एक पटक चार्ज गरेपछि हाम्रो सेलफोनले डेड दुई दिन सम्म पनि मज्जाले कुरा गर्न, विभिन्न एप्लीकेशनहरु चलाउन सहज बनाईदिएको छ।
लगानी सम्मेलनको कुम्भ मेला : फरक मत राख्नेहरु पनि एकै ठाउँ, राम्रा पक्ष बुझाउन भ्याई नभ्याई
उनीहरुको प्रस्तुति र भाषण सुन्दा लाग्थ्यो सबै सत्तापक्ष, सबै सरकार । दृश्य हो, काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको । सम्मेलनमा सहभागी थिए –सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता, उद्यमी व्यवसायी र लब्धप्रतिष्ठिहरु ।
हिरा व्यापारी मोदी लण्डनमा समातिए
काठमाडाैं - पञ्जाव नेसनल बैंकको २ अर्ब डलर घोटाला गरेको आरोपमा भारतीय हिरा व्यापारी नीरव मोदी लण्डनमा पक्राउ परेका छन् । मोदीलाई लण्डन प्रहरीले होल्बोर्न क्षेत्रबाट मंगलबार पक्राउ गरेको हो । बुधबार वेस्टमिनिस्टर अदालतमा पेस गरिएकामा उनको धरौटी माग अस्वीकार गरिएको छ ।
तराईमा आज होली, हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
भौगोलिक संरचना र मान्यताअनुरूप फागु पूर्णिमा मनाउने चलन छ । पहाडी जिल्लामा बुधबार नै फागु पूर्णिमा मनाइएको छ । तर, जनकपुरबाहेकका मधेस तथा तराईका जिल्लाहरूमा भने आज होली मनाइँदै छ ।
चितवनमा रमाउँदै हिमालको लुलु गाई
अनुसन्धानका लागि हिमाली जिल्लाबाट ल्याइएको लुलु गाई चितवनको तापक्रममा पनि घुलमिल भएको छ । मुस्ताङमा जन्मिएको लुलुलाई चितवनमा ल्याएर बहर लगाइएको छ । एउटा गाई ब्याइसकेको छ भने तीन गर्भिणी छन् ।
सगरमाथामा बिलाएका आरोहीहरु, इतिहास कथा
सगरमाथा एउटा सपना हो जसको प्राप्तीकालागि बर्षेनी धेरैजना आरोहीहरु ज्यानको जोखिम मोलेर जानेगर्दछन् । सबैजनाको भाग्यमा चुचुरो अनि जीवनकहाँ हुन्छ र ? कतिजनाले त जीवन सगरमाथाको काखमा गुमाएका छन्, पातलो हावाले अक्सिजन साँचेको कहाँ कुन्छ र ? सानो गडबडिले पनि ठुलो जोखिम दिनेगर्दछ । फेरि मौसम कसका् हातमा हुन्छ र ? मौसमको पासा पल्टेसँगै जीवनको लिला समापन भएका धेरै व्यक्तिहरुका लाश अझै पनि सगरमाथाका हिँउसँगै सलबलाईरहेका छन् । आउनुहोस आज त्यस्तै केही सगरमाथा समाधी पाएका विदेशी नाम अनि तिन्का पहिचान र तथ्यहरु बारे छलफल गरौ ।
Add My Website | Contribute | Terms and conditions | Contact Us